Xalalka Hardware ee ugu yar - Zhongshan City YALIS Hardware Products Co., Ltd.
Xalalka Hardware Albaabka ugu yar
Iyadoo 80s iyo 90s ay noqdeen macaamiisha ugu muhiimsan iyo caanka ah ee qaabka ugu yar iyo guryaha la habeeyey, warshadaha albaabka iyo warshadaha aluminium profile waxay sameeyeen albaabada ugu yar (oo ay ku jiraan albaabada aan la arki karin iyo albaabada saqafka sare) si loo daboolo baahida suuqa.
Albaabada ugu yar ma aha oo kaliya inay ballaariyaan booska muuqaal ahaan, laakiin sidoo kale waxay ku dhex daraan booska guud si loo ilaaliyo midnimada booska.Sidaa darteed, YALIS waxa ay samaysay qufulka gacanta albaabka ugu yar oo ku salaysan sifooyinkan albaabada ugu yar.
Gacan-qabsiga Albaabka Taxanaha BADAN
Si loo mideeyo gacan-qabsiga albaabka iyo albaabka, YALIS waxa ay bilawday taxane BADAN sanadka 2020, inta badan albaabada ugu yar ee dhamaadka-sare, oo leh qaabkeeda ugu yar, si loo gaadho saamayn dhammaystiran.
1. Gelitaanka gacan-qabsiga albaabka waxaa loo isticmaali karaa dusha sare ee albaabbada, si ay u noqoto isku-dhafka ugu fiican ee albaabka.
2. Gacanku wuxuu ka samaysan yahay aluminium aluminium, kaas oo lagu daaweyn karo isla dhammaystirka aluminiumka albaabka ugu yar.
3. Qaabka furan ee ka hortagga rabshadaha ee patent-ka ayaa ka dhigaya gacan-ku-haynta albaabka mid aan fududayn in la laadlaado oo sii kordhiso cimrigiisa adeegga.
4. Daboolka wuxuu ku daboolan yahay shaati nylon si looga hortago xagashada.
5. Kiiska shaqo joojinta la hagaajin karo wuxuu yarayn karaa dhibka rakibidda wuxuuna wanaajin karaa waxtarka rakibidda.
Iyadoo la higsanaayo sifooyinka albaabada ugu yar, YALIS waxa kale oo ay horumarisay gacan-qabsiga albaabada taxanaha ah ee qaanso roobaadka.Sida MULTIPLICITY, qaanso roobaadyadu waxay sidoo kale u hoggaansantaa fikradda isku dhafka qufulka gacanta albaabka iyo albaabada si loo ilaaliyo midnimada meel bannaan.
3. Fogaanta dhexe ee qufulka daboolka ayaa laga beddelay 40mm ilaa 45mm, daloolka dunta ee gacanka albaabka wuxuu qaataa nashqad xarrago leh si ay uga ilaaliso gacantu inay taabato gacanta marka la rogo gambaleelka.
4. Dhismaha guga hal-jidka ah ayaa si wax ku ool ah uga hortagaya gacanka albaabka inuu hoos u dhaco.
5. Ballaca gacanka albaabka waa 40mm, kaas oo aad ugu habboon cabbirka gacanta bini'aadamka oo kor u qaadaya dareenka.
Albaabka Albaabka Qarsoon
Albaabka qarsoodiga ah ee qarsoodiga ah wuxuu leeyahay shaqada dhuuban ee dhaqameed iyada oo aan la burburin quruxda albaabada ugu yar.Taxanaha YALIS MULTIPLICITY iyo taxanaha qaanso roobaadka, waxay sare u qaadi karaan quruxda albaabada ugu yar.